Chii chinonzi networking | Economy Finance
Encarni Arcoya | 07/01/2022 15:51 | Yakagadziridzwa ku 07/01/2022 15:53 | Negocios
Munyika iri kuwedzera yakabatana umo madaro haachave dambudziko uye iwe unogona kuve nevatengi uye kutaurirana nemunhu chero kupi zvako pasirese, network yave tsika yakajairika kune vese mabhizinesi uye nyika yebasa. . Asi, Chii chinonzi networking?
Kana iwe usati wanyatsojeka nezve izwi iri rinonzwika muzviitiko zvakawanda zvepamutemo uye zvisina kurongeka, kana zvese izvo temu iyi inosanganisirwa, saka iwe unofanirwa kutarisa izvo zvatakakugadzirira iwe.
1 Chii chinonzi networking
2 Ndezvipi zvinangwa zvaunazvo
3 Ndeapi marudzi enetwork aripo
4 Maitiro ekuita Network
Networking inogona kutsanangurwa sechiitwa chinosanganisira kuwedzera kunetiweki yevanobatika nemuzvinabhizinesi. Mune mamwe mazwi, tiri kutaura nezve kuvaka network yevanobatika asi tiine chinangwa chaicho: kuva nemikana yakawanda yebhizimisi nemikana yebasa.
Tinokupa muenzaniso. Fungidzira kuti unosaina kuita dhigirii re masters (kutarisana-kutarisana kana online). Mariri mune vanhu vakawanda uye chinhu chakajairika kugadzira boka, kunyangwe gare gare, wega, iwe uchasangana nechikamu chevanhu ivavo. Aya ndiwo anobatika uye iwo mikana yebhizinesi sezvo iwe uchigona kutarisa pane chimwe chikamu chedhigirii ratenzi uye mumwe munhu pane mumwe uye iwe unonzwisisana.
Zvinoita sekunge iwe unogadzira denderedzwa revanhu vanogona kuve mikana (rimwe basa, shandura basa, nezvimwewo). Chimwe chinhu chakafanana nedenderedzwa rako reshamwari nemhuri asi chakanangana nenyaya yebasa. Izvi ndizvo zvakaita networking.
Ndezvipi zvinangwa zvaunazvo
Kunyangwe takambokuudza kuti chinangwa ndechekuve nemikana yebasa nemikana yebhizinesi, chokwadi ndechekuti pane zvakawanda zvaunogona kuwana kubva kune network. Semuyenzaniso:
Ita kuti basa rako, chigadzirwa kana sevhisi zvizivikanwe, kuita kuti mumwe munhu akuzive uye nekugadzira kuoneka kwechako uye / kana nyanzvi brand.
Gadzira hukama nemakambani, vatengesi, vaparidzi, vanobatana, vangangove vatengi ...
Iva neruzivo rwakanaka rwemusika, kwete chete yeunoshanda, asiwo yevamwe vangave vane hukama.
Chaizvoizvo, networking inzira yekuve nedenderedzwa revanhu, makambani, nezvimwe. izvo zvinogona kukubatsira chero nguva kuti ushambadze zvaunoda kuburitsa padanho rehunyanzvi.
Ndeapi marudzi enetwork aripo
Zvino zvaunoziva kuti networking chii, iwe unofanirwa kuziva kuti hapana mhando imwe chete, asi mhando mbiri dzinotangwa:
Pamhepo, umo ma "basa" ekubatika anowanikwa kuburikidza nechaiyo midhiya senge masocial network, WhatsApp, maemail ... Hukama hwakati dzikamei, nekuti hauzvizivi iwe pachako, asi hunogona kunge hwakangonaka sezvinotevera. tichaona. Semuyenzaniso, une dhigirii riya ratakambotaura uye kuti wakazviita online saka hauone vaunoshanda navo unongotaura navo negroup (networks, WhatsApp ...).
pasina Indaneti, kwaunogona kuwana network muzviitiko zvechiso nechiso chaunopinda, mumakonferensi, maworkshops, makosi, zvidzidzo, kana kunyangwe kubasa (nekuti unosangana nemunhu kubasa anogona kukubatsira kuti usvetukire kune imwe kambani, semuenzaniso). Zvino, kuti uite izvi unofanirwa kuve nehunyanzvi hwekushamwaridzana uye usanyara kuti ugone kurondedzera.
Vakomana vese vakanaka havo imwe neimwe ine zvayakanakira nezvayakaipira. Zvinogara zvakanaka kusanganisa ese ari maviri, sezvo online ichibvumidza iwe kusvika kune vanhu avo, kana zvisina kudaro, iwe waisazombosangana kana kuonana; uye pasina Indaneti iwe unenge uine nzvimbo yekuzviita kuti uzivikanwe uye kuunza yakanaka yekutanga fungidziro.
Maitiro ekuita Network
Maererano ne chii chinangwa chaunoda kuzadzisa netiweki, uchafanira kuita neimwe nzira. Hazvina kufanana kana iwe uchida kunetiweki kuti uwane basa pane kana iwe uchizviita kuzivisa masevhisi ako se freelancer. Naizvozvo, pakati pezviito zvaunogona kuita ndezvi:
Ipa bhizinesi rako kadhi. Izvi zvinonyanya kuwanda muinternet networking, sezvo iwe uchipa kumunhu sechinhu chenyama (chausingakwanise online). Iyo data inonyanya kukosha inofanirwa kuratidzwa mairi uye, kana zvichibvira, zvakare zviri nyore kuti iwe uite inokwezva zvakakwana, uye yakakosha kwauri, kuti vayeuke kuti ndiani akavapa uye chinangwa chako chaive chii.
Gadzira nzvimbo yeelevator. Chimwe chinhu chatinogona kutaura chakafanana nekadhi rebhizinesi, uye rinoshanda zvakanyanya kune networking online, ikwiridziro yepitch. Iyo iratidziro isingapfuuri maminetsi maviri nezvewe, bhizinesi rako, chigadzirwa, sevhisi kana basa uye zvauri kuda kuzadzisa.
Enda kune zviitiko. Mupfungwa iyi, zviitiko zvekutarisana kumeso zvinowanzoita zvirinani pane zvepamhepo, asi isu hatisi kuzokuudza kuti urase izvi. Chokwadi, hazvina kukwana kungopinda uye iye zvino. Iwe unofanirwa kurondedzera (munyaya yepamhepo, kutaura, uye zvakawanda) kuitira kuti vanhu vakuzive, kuti vazive kuti ndiwe ani. Usatya kusvetukira mukati uye kupa kadhi rako, kana kutaura nevanhu vanokufarira, kunyangwe vangakuudza kuti unobhowa. Zviri nani pane kugara mukona pasina anouya nekuti zvinenge zvisina basa.
Gadzira nzira yekuonana nayo. Fungidzira kuti waenda kuchiitiko chawakazvizivisa uye waita vanhu vakanaka. Zvisinei, pashure, hapana chaunoita. Nehurombo ichi chinhu chinoitika kazhinji, uye chinhu chakanakisa chaunokwanisa / chaunofanira kuita ndechekugadzira zano rekubata vanhu ava, uvayeuchidze kuti ndiwe ani, taura pazvinhu, uye ugone kuchengetedza chisungo chakakubatanidza. Izvo zvakakosha nekuti, zvikasadaro, ivo vanozopedzisira vakanganwa nezvako.
Sezvauri kuona, networking chishandiso chinobatsira kwazvo nhasi, uye zvicharamba zvichiwedzera, kunyanya sezvo mabhizinesi nemakambani asingachagari chete muguta ravanogadzikwa, kana munyika, asi vanoyambuka miganhu Uye. vanogona kuenda kure kana uine macontacts akanaka kuti uzviite.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Negocios » Chii chinonzi networking
Chii chinonzi hupfumi hwakasanganiswa